द एक्स्टर्स मा बॉल सकर पानी उछाल
अगस्टमा 16 औं छेदमा पानी भर बल्ला छोडेर राष्ट्रिय
01 को 01
कसरी प्रकृया-दिन छोड्ने फटाउन एक मालिकको परम्परा बन्यो
एन्ड्रयू रेडटनटन / गेट इमेजहरू
यस मास्टर्स मा टूर्नामेंट हप्ता को समयमा धेरै परंपराहरु छन्। सायद तीमध्ये एक मात्र "अशुद्ध" भनिन्छ। त्यो खेलाडीहरूको परम्परा हो जुन गोल्फ बलहरु लाई 16 औं छेद मा पानी को पार अभ्यास को दौरा को समयमा छोडने को प्रयास गर्दछ।
अगस्टाना नेशनल गोल्फ क्लबमा होल नम्बर 16 170-यार्ड पर्-3 हो; त्यो भन्दा धेरै यार्ड को एक तालाब ले जान्छ।
यहाँ कसरी "स्किप शट" सामान्यतया जान्छ:
उनीहरूको अभ्यास राउन्डमा खेलाडीहरू 16 अंकमा आइपुग्छन्। तिनीहरूले अभ्यास राउन्डको भागको रूपमा उनीहरूको टी बलमा हिर्काए।
तर फ्यानहरू थप चाहन्छन्। तिनीहरूमध्ये केही "छोड्नुहोस्" वा "छोड्नुहोस्" भनिरहन्छन्। अधिकांश गोल्फहरू जसले प्रशंसकहरूको मागहरूको जवाफ दिन्छ। (ती प्राय: बूढी हुँदैनन्।)
खेलाडीहरूले टी बक्सको सामने एक बैंकमा माथि उठाउँछन् जुन पानीको किनारामा ढल्यो।
उनीहरूले आफ्नो बललाई पानीको सतहमा हिर्काउँथे (प्रायः क्लबफेसलाई बन्द गरेर, बल फिर्ता बलमा राख्छन्, र बलमा हुक स्पिन राख्दछन्), बल छोड्न वा तालाबको सतहमा स्किम गर्ने प्रयास गर्दछ।
यदि गोल्फ बल तालाबको अर्को छेउमा पुग्छ भने, सतहमा पुग्नको लागि यो 16 अंक हरियो को सामने एउटा पाङ्ग्रा चढ्न पर्छ।
हरियो लुकाएको गोल्फ बल जो हरियो मा हावा गर्दछ एक ठूलो जयकार प्राप्त गर्दछ। तर हरेक खेलाडी जसले प्रयास गर्दछ, कि सफल वा छैन, प्रशंसकहरूबाट उपकरण र चियर प्राप्त गर्दछ।
यी दिनहरू, लगभग हरेक गोल्फर स्किन शटमा 16 को प्रयास गर्दछ (जुन ती प्रशंसकहरू निराश गर्न चाहन्छन्?)। कति सफलतापूर्वक भरिएको छ? अनुमानहरू भिन्न हुन्छन्, तर हरियो मा हावाको बलहरूको प्रतिशत उच्च छैन। सम्भवतः आधा बलहरू विपरीत बैंकमा पुग्छन्।
के कुनै पनि छोड्ने शॉट एक होल इन-वनमा परिणाम छ?
गोलाकारहरू जो अगस्टका लागि जाँदैछन् वर्षौंको लागि बल छोडिदिनु राम्रो हुन्छ। निक फलाडोले एक पटक छिटो उत्तराधिकारी, छिटो-आगो शैलीमा चारवटा बलहरू छोडे।
र, हाँ, त्यहाँ पनि एक जोडा पनी भएको छ। विजय सिंहले 2009र मार्टिन कमेरर 2012 मा दुवै गोलले पराजित गरे जुन 16 औं हरीमा पुगेको थियो, कपमा घुमाईयो र अक्टोबरमा हरायो। तपाईं सिंह र कमर इजको भिडियो भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, साथसाथै YouTube मा अन्य 16 औं छेद छिपछिन्।
बल स्लिपिङ परम्पराले कसलाई सुरु गर्यो, र कहिले?
कसले 16 अंकमा स्प्लट हिट परम्परा सुरु गर्यो? कुनै पनि साँच्चै निश्चित छैन, तर 2005 मा प्रकाशित गोल्फ डाइजेस्ट लेख ले ली ट्रेभिनलाई मुख्य संदिग्धको रूपमा संकेत गर्यो।
Trevino को लागी पहिलो संख्या 1980 को बीचमा पहिलो अंकमा 16 तालाब केहि समय सम्म बल छोड्यो। त्यसैले जब बलमा परम्परा झल्किन्छ एक परास्नातक सबैभन्दा मजाक हो, यो यसको सबैभन्दा सानो परम्परा पनि हो।
1 962 यू.एस. ओपन: 'बिग ग्याज बाहिर पिजेज छ'
1953 राइडर कप: संयुक्त राज्य अमरीका विजेता ले आउट गर्दछ
Web.com टूर अनुसूची: 2018 सिजन रन्डाउन
महिलाहरु को विश्व गोल्फ रैंकिंग
पीजीए टूर अनुसूची: 2017-2018 सीजन
ब्रिटिश ओपन प्लेऑफ ढाँचा
क्या Augusta नेशनल प्रो प्रो पसल छ?
10 सर्वोत्तम गोल्फ जसले कसले पराजित गरे परास्नातक
1989 मास्टर्स टूर्नामेंट: फाल्डोको पहिलो
1996 यूएस ओपन: जोन्स गोर्खा सूचीबाट विजेता सूचीमा जान्छ
आवश्यक जर्मन वाक्यांश पुस्तिका
इनपुट र आउटपुटको बारे C ++ मा जान्नुहोस्
संचार प्रक्रियामा प्राप्तकर्ता
होमर र मार्कको सुसमाचार
Moonstone को आध्यात्मिक र उपचार गुण
परिभाषा र क्विग्ग्रेन्ट एनोसोन्सका उदाहरणहरू
2018 मा खरीद गर्न 8 सर्वोत्तम लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
यो बस मा! 15 हिमालय टिभि न्यूज ब्लूपर्स
चमक पानी कसरी बनाउने
अमेरिकी क्रांति: क्युबेकको युद्ध
अपग्रेड डाउनटाइमको लागि मिनी पाठहरू
जॉन क्यारोल विश्वविद्यालय प्रवेश
शिक्षकहरूको बारेमा दस साधारण मिथकहरू
किलर व्हेल डोर्टल फाइन को संक्षिप्त
बिटल्स एबे रोड
पाठ फाइलहरू पर्लसँग कसरी प्रसोधन गर्ने
बासका लागि माछा आकर्षितकर्ताहरूको प्रयोग गरेर सजिलो जानुहोस्
तपाईंको स्वभाव बनाउनुहुने मजेदार उद्धरणहरू धेरै राम्रो देखिन्छ
मान्छेलाई अंग्रेजीमा नमस्कार गर्दै
कसरी सही व्यवसाय स्कूल विशेषज्ञता छान्नुहोस्
शीर्ष 10 ओबामावाद
हीरोको यात्रामा पूर्णतम गुफाको दृष्टिकोण
21 ठूलो एनिम सीरीज र वयस्कहरूको लागि चलचित्रहरू
Tlaxcallan - एज्टेकस को विरुद्ध मेसोअमेरिकन कांच
अंग्रेजी भाषा शिक्षा जापान